Chii chiri kureba Ring Boulevard? Ndeapi mabhalevard anoita izvi zvinosanganisira? 10 km uye 10 Boulevards Ring Ring yeBurlevard Ring inogara iri mumigwagwa muCentral Administrative District yeguta reMoscow, ine gumi ...
Nzira uye sei iyo burqa yakaonekwa? Kwete, ichi hachisi chifukidziro pamusoro pechiso, asi kunyange nenguo yakareba ine mhemberi yakareba yakareba, inokandirwa pamusoro pemusoro uye inosvibisa mufananidzo wose kubva kumusoro ...
Ndezvipi zvinozivikanwa pamusoro pezvakaitika zveputipi yemitambo? Maererano nevatsvakurudzi, zviratidzo zvemapuranga zvakaonekwa 40 zviuru zvemakore apfuura, bedzi kare vakange vasina kushandiswa nekuda kwekuvaraidza, asi pamitambo yemashiripiti. Zvimwe ...
Guta reItari ...
Nzvimbo yakabva kuLake Victoria Basin? Mhedzisiro yeLake Victoria ndiyo Tectonic Lake Victoria ndiyo yechipiri yakakura mvura yakachena mumvura pasi pano. Yakawanikwa muna 1858 nemumwe mufambi wekuChirungu uye muongorori weAfrica, John ...
Sei muUnited States inodaro mapurisa mapurisa anopfeka nyeredzi nemhando dzakasiyana dzemirazi? USA-e kak izwestno federazija, ini ndakatarisa mamiriro ezvinyorwa zvatinosangana nazvo ... inobva pachiremera ...
Ndekupi kwaungava pane kati yenyika ye Munich, mune nyika ipi? Bvumirana zvizere nemashoko. Munich ndeyechokwadi muGermany. Iwe zviri nani kuti urege kugara paInternet zuva rose, uye dzidza geography!
Chii chakaitika muTanan-an-Men Square? Akaponesa nyika, uye inotungamirira kuhubudiriro. Vose vanovhiringidzika vanofanira kusungirira. Kwose kwose ... Kana iyo Emergency Komiti isingatsvaki nyoka, ipapo zvose zvingava zvakawanda ...
Makomo ari kumadokero kweAmerek Appalachians of Colorado *** Rocky Mountains (English Rocky Mountains), mu Cordillera system yeNorth America, kumadokero kweU.SA neCanada, pakati pe60 ne32. sh. Nzvimbo iri pamepu ...
Ndekupi nzvimbo inowanikwa nzvimbo - Valdai uye chaiyo chinzvimbo chenyika ndeye Valdai guta (ne1770) muRussia, yenharaunda yekugadziriswa kwenharaunda, iyo nzvimbo yehutungamiri yedunhu reValdai yedunhu reNovodod. Nhamba yevanhu 18,1 zviuru ...
Uye ndiani anoziva kupi kwaungawana guta Borisoglebsk Borisogle # 769; bsk guta (ne 1779) muRussia, nzvimbo yepamusoro yeBorisoglebsky weruwa rwe Voronezh. Population 68,2 iwe. (2005). Guta iri riri pamahombekombe eruboshwe rwizi ...
Ndiani Albert Einstein uye nei akaenda kuAmerica? kubva kuSpkov he, vedu, madzitateguru, yakabiwa nevavengi vake! iye pachake aisazosiya, nokuti, uye hupfumi, paCavo? German ...
Imbwa yaani yaiva iyi? Zita rechivakwa chii? mum ... Ichi chiyeuchidzo chakazvitsaurira kune mafungiro evanhu kune mhuka isina misha. Mukati yekuchengetedza kweMallevskaya metro gare chivako chekunzwira tsitsi chakazarurwa. Iye zvino vafambisi vegwagwa vanozokwaziswa nemhangura ...
Ndezvipi zvinotaurwa muAustralia nemisoro yavo? tapota pindura Australia iyi ndiyo mamiriro e. Guta guru iSydney. Australian Union-Canberra, Tasmania inyika yeAustralia iri pachitsuwa chezita rimwe chete mu240 km sasi ye ...
Mibvunzo ye108 mu database yakagadzirwa mu 0,660 masekondi.